I-Algolia: Ukucinga Kwangaphakathi Kwesikhathi Sangempela Njengesevisi | Martech Zone
I-Algolia: Usesho lwangaphakathi lwesikhathi sangempela njengesevisi
NgoMsombuluko, Februwari 17, 2014 Douglas Karr
Ukwakha amakhono akho wosesho lwangaphakathi acebile, isikhathi sangempela, nokushesha impela kuwumsebenzi. Ngeza kukho ukusesha kwendawo, izithombe, ezentengiselwano kanye neselula futhi ngokuyisisekelo wenza ipulatifomu yonke. Besikhuluma nje nomkhiqizi namhlanje ekuseni ngamakhono abo okusesha nokuthi isici sidinga ukwaziswa kakhulu kusayithi labo.
Akunasidingo sokuthuthukisa okwakho - Algolia iyinsizakalo yokusesha ebanjwe ngokuphelele, etholakala njenge-REST API. API amaklayenti ayatholakala kuzo zonke izinhlaka ezinkulu, amapulatifomu nezilimi nokudluliswa kwedatha phakathi kwamakhasimende kanye ne API ikufomethi ye-JSON.
Ukusebenza okuphezulu - Izikhathi zokuphendula zifike kuzikhathi ezingama-200 ngokushesha kune-Elasticsearch, futhi zifike ezikhathini ezingama-20,000 ngokushesha kune-SQLite FTS4. Inkomba iyathandeka ngakho-ke abasebenzisi bangasesha imizuzwana emisha yedatha ngemuva kokuvuselelwa. Baphinde baveze i- API ukubheka isimo sokukhomba.
Nginx - Ukuqaliswa kohlangothi lweseva lwe-Algolia kubhalwe ngokuphelele ku-C ++ futhi kushumekwe njengemodyuli ngaphakathi kweseva ye-HTTP yokusebenza kwe-Nginx.
Dashboard - Isikhombimsebenzisi esisodwa sokuqhafaza sayo yonke imisebenzi, kufaka phakathi ukusetshenziswa, ukusebenza, izilungiselelo, API izingodo, API okhiye nokuphequlula idatha.
Ukusesha kweDatabase - yakhelwe ukusesha amarekhodi, hhayi amakhasi
Isixazululo esifanele semininingwane yolwazi ye-SQL ne-NoSQL, ene-algorithm esezingeni esobala elungiselelwe idatha eyakhiwe kancane.
Izici eziningi - yamukela izinhlobo zezinto nanoma iyiphi inombolo yezimfanelo okufanele iseshwe kuyo.
Sesha njengoba uthayipha - ngaphezu kokuqedela okuzenzakalelayo okulula, abasebenzisi bathola imiphumela yokucinga ebuyekeziwe ngohlamvu ngalunye abaluthayiphayo.
ukuqondana - Isikhundla esenziwe ngokwezifiso ngokuphelele futhi esobala. Algolia inikeza indlela elula yokuhlunga imiphumela ngokuthandwa ngenkathi futhi igcina ukuhambisana.
Hambayo - yenzelwe iselula… iyashesha, xolela typos bese uhlela imiphumela ngebanga le-geo.
Linguistics - Sesha kunoma yiluphi ulimi olubhaliwe. Isibonelo, ukusesha usebenzisa isiShayina esenziwe lula kungathola izingoma ezifanayo ngesiShayina sendabuko.
Ukulungiswa kweTypo - Algolia iyaqonda ukuthayipha, noma kuzinhlamvu ezimbalwa zokuqala, ngakho-ke abasebenzisi bakho bangakuthola abakufunayo.
Ukugqamisa okuhlakaniphile - Gqamisa ukuthi yisiphi isigaba esifane nombuzo womsebenzisi, noma ngabe isigaba kuphela izinhlamvu ezimbalwa zokuqala zegama futhi siqukethe typos.
Ukubhekana nesikhathi sangempela - okuwukuphela kwenjini yokusesha ephakamisa izici njengoba uthayipha, ngakho-ke abasebenzisi bathola imiphumela yokuthwebula ngemuva kokuchofoza ukhiye wokuqala.
Ukusesha kwe-Geo - Khombisa hits ngebanga, noma kuphela labo abaseduze, noma endaweni ethile. Hlanganisa nemibuzo yombhalo kanye nezinye izici zokusesha.
Ukutholakala Okuphezulu - a 99.99% I-SLA (isivumelwano sezinga lesevisi). Konke ukufakwa kwedatha kukhonjwa ngokuzenzakalela kumaseva amathathu aphezulu aphezulu.
Abasebenzisi abaningi be-datacenters - gcina isikhathi sokuphendula siphansi ngokukhetha i-datacenter esiseduzane kakhulu nabasebenzisi bakho.
Ukuphepha kwezinga lokuqala - API okhiye bakhawulela ukufinyelela kunkomba ethile, futhi babeke imikhawulo enjengezinga eliphakeme lombuzo lekheli le-IP, noma isikhathi sokuphelelwa yisikhathi sokhiye.
Tags: algoliausesho lwangaphakathinginxsesha njengensizakaloSesha Marketing
Iqiniso Langempela Ngomsebenzi Wakho Wokuthengisa
Ushintsho Ezabelweni Zokumaketha Zika-2014